QM oo ka digtay khatar ku soo fool leh ku dhawaad 3 Malyan oo qof | KEYDMEDIA ONLINE
QM oo ka digtay khatar ku soo fool leh ku dhawaad 3 Malyan oo qof
Isbaddalka Cimillada, abaaraha iyo fatahaadaha meelaha qaar dalka oo is kaashaday ayaa sababi kara in ku dhawaad saddex malyan oo qof ay soo food-saarto cunno yari.
MUQDISHO, Soomaaliya - War ka soo baxay Xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan Isku-duwidda Hawlaha Bani’aadamnimada (OCHA), ayaa lagu sheegay in qiyaastii 2.73 milyan ilaa 2.83 milyan oo qof, guud ahaan Soomaaliya la filayo inay la kulmaan dhibaatooyin cunno yari oo ka daran middii hore u jirtay.
25-kii bishii Abriil, Dowladda Federaalka ee Soomaaliya, ayaa ku dhawaaqday in ay dalka ka jirto abaar ba’an, iyada oo xaalado abaareed oo dhexdhexaad ah ama daran ay saameeyeen in ka badan 80 boqolkiiba degaannada dalka.
Hayeeshee, roobabkii Gu'ga ayaa markaa ka billowday qaybo ka mid ah waddanka, dabayaaqadii bishii Abriil iyo horraantii bishii May, taas oo dhalisay in wabiyada Shabeelle iyo Jubba ay daadad xoog leh geystaan, kuwaas oo saameeyay 400,000 oo qof, oo 101,300 ka mid ahi ay barokaceen.
Xaafiiska OCHA, ayaa sheegay in Soomaaliya ay la daalaa dhaceyso, labo xaalad oo aad u daran, sida Isbadallada Cimillada iyo colaadaha qaan gaaray ee dalka ka jiray muddada dheer.
“Ururada bani'aadamnimada ayaa sii wada ka jawaabidda goobaha baahiyaha ugu badan ay ka jiraan, sida qaybinta biyaha, fayadhowrka iyo nadaafadda iyo waxyaabaha aan cuntada ahayn sida lacag kaash ah, laakiin maalgelinta ayaa weli ah waxa ugu muhiimsan hawlgallada bani'aadamnimada ee dalka”, Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xafiiska OCHA.
“Qorshaha Ka jawaabidda baahiyaha bani’aadanimada Soomaaliya ee 2021 wuxuu ubaahan yahay US $ 1.09 bilyan si loogu caawiyo 4 milyan oo qof, laakiin hadda waxaa kaliya la maalgaliyay 20 boqolkiiba”. Ayaa sidoo kale lagu xusay warka OCHA.
Golaha Wadatashiga Qaran oo Muqdisho ku kulmaya isbuuca soo socda
Warar 22 June 2021 20:40
Ra’iisul Wasaaraha Xukumadda Maxamed Xuseen Rooble, ayaa ku casuumay Madaxda Dowlad goboleedyada shir Golaha Wadatashiga Qaranka isugu imaanayaan Sabtida kaas oo ka dhacaya Muqdisho.
Aqalka Sare oo daadka raacsiiyay lix wareegto oo Farmaajo saxiixay
Warar 22 June 2021 18:41
Kooxda Al-Shabaab oo kordhisay weerarada ka dhanka ah Kenya
Warar 22 June 2021 17:26
Villa Somalia oo la soo baxday hab-dhaqankii maafiyada
Warar 22 June 2021 16:03